Ogaden News Agency (ONA) – Ma ayaandaraa haysata Shacabka Itobiyaa? – Noora Afgaab
Ma ayaandaraa haysata Shacabka Itobiyaa? – Noora Afgaab
Obama sidii la filayay, wuu yimid hadana wuu ambabaxay. Muxuu soo kordhiyay? Bogaadin aanay marnaba filaynin mucaaradka iyo shacabka Itobiya oo uu usoo jeediyay dimoqraadiyadda ka hirgashay Itobiya ee 100% ay ku guulaysteen EPRDF. Oday ay ka muuqato islaweynida odayaasha reer magaalka ah oo aan weligii soo fadhiisan meelaha lagu haasaawo isagoon xidhnayn garafaati (necktie) aad ku dhaaran karto inuu iibsaday cahdigii Xayle Salaasi, ayaa waxaa ka mid ahaa faalada uu arintaa ka bixiyay; “.. ayaandarada haysata shacabka Itobiya waxaa ka mid ah in caalamka heshiis ku yahay in loo daayo Itobiya siday kolba tahay oo aan la faragalin.” Wuxuu sii raaciyay hadalka intaan laga jarin;
“Haduu boqor xukumo in lagu amaano, haddii askar shuuci baan nahay leh xukunka qabsadaan in lagu amaano. Maxaa diidaya in la amaano koox leh 5tii sanaba mar ayaad na dooranaysaan?”
Arintaasi waxay keentay buu yidhi, inuusan isbadal badan ka dhicin Itobiya, marka loo eego dunida 3xaad, oo kolba kooxdii xukunka qabsata lagu naasnuujiyo inay ilaaliyaan xasiloonida si aanay Itobiya u kala daadan. Isla odaygii ayaan weydiiyay sababta keenaysa in Itobiya xaalad kasta lagu aamno oo aan lagu qasbin isbadal. Xoogaa ayuu aamusnaa, aan is-idhi wuxuu ka fahmay sidaan u jajabasanayo amxaariga in aan ahay Somali marka wuxuu ka fikirayaa siduu iigu dhigi lahaa jawaabta. Ka dibna wuxuu yidhi;
“Waxaan u malaynayaa taariikhda ay leedahay Itobiya inay sabab u tahay.” Wuxuuse sii raaciyay; ” Siyaasiga Itobiya wuxuu aad u yaqaanaa sida loo dhex boodo mawjadda kolba caalamka ka socota. Moodada hadda socota waa la-dagaalanka argagixisada islaamka. Itobiya waxay ka gadaysaa caalamka dhalinyaro aan qiimi ugu fadhiyin oy leedahay waxaan ka horgaynayaa argagixisada. Obama iyo reer galbeedka oo aan rabin ama kala cabsanaya dhalinyaradooda inay ku dhintaan dagaalka ayaana ka gadanaya. Marka sow in la amaano ma’aha kooxda hadda noo talisa ee diyaarinaysa dhalinyaradaa?” Aad ayaan ula dhacay jawaabta odayga. Waxaan damcay in aan lasii wado hadalka, hasa ahaatee waxaa u yimid wiil aan filayo inuu awoow u yahay, markaasuu si ree-magaalnimo ah u cudurdaatay.
Itobiya waa siduu odaygaa u tilmaamay. Ciyaar walba way dhex fadhidaa. Waxaan la soconaa Minilk warqaduu u qoray dawladihii Yurub ee doonayay inay qaybsadaan Afrika inuu ku yidhi; Arintaasi Itobiya banaanka kama daawan doonto. Wuxuuna sidaa kaga qaybgalay qaybsigii Afrika, tijaaradii adoonsiga Afrikana (African slave trade) qayb ayay ka ahayd. Casrigii Xayle Salaasi markay shucuubta Afrika gobanimada u dagaalamayeen, wuxuu ka mid noqday kuwa taageera ilaa Afrikaanka ay ku tilmaameen inuu yahay -Aabihii Afrika-, isagoo gumaysanaya shucuubta Afrika qaarkood.
Waxaa aad u adag in la rumaysto in aanay sirdoonka reer Galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, ogayn xidhiidhka ka dhexeeya Shabaabka iyo ciidanka Itobiya. Sidaa daraadeed dad badan oon la kulmay ayaa ku odhanaya argagixisada ayaab ah mashruuc la abuurayo oo loogu talagalay in ujeedo lagu fushado. Itobiyana arintaa ayay ogaatay ama loo sheegay, si fiican ayayna uga faa’idaysanaysaa. Waxaa ku dulman oo kali ah ciyaartan socota shucuubta Geeska Afrika ee u kala horeeya Somali, Kenyaan iyo Eretreeyaan.